Barcelona oo si sahlan saddexda dhibcood kaga soo qaadatay kooxda Eibar oo ay booqatay… +SAWIRRO – Gool FM
Barcelona oo si sahlan saddexda dhibcood kaga soo qaadatay kooxda Eibar oo ay booqatay… +SAWIRRO
Dajiye October 19, 2019
(Spain) 19 Okt 2019. Barcelona ayaa guul sahlan kaga soo gaartay kooxda Eibar oo ay ku booqatay garoonka purua Municipal, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-3, kulankooda 9-aad horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 0-1 ay ku hogaamineysay kooxda martida aheyd ee Barcelona.
Daqiiqadii 13-aad Antoine Griezmann ayaa hogaanka u dhiibay kooxdiisa Barcelona wuxuuna dheesha ka dhigay 0-1, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Clement Lenglet.
Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay dheesha, Barcelona ayaa waxay markale sameysay qaab ceiyaareed aad u fiican, iyagoo sameeyay fursado dhowr ah si ay u dhaliyaan goolal kale.
Laakiin daqiiqadii 58-aad Lionel Messi ayaa ciyaarta ka dhigay 0-2, iyadoo uu goolkan ka caawiyay Antoine Griezmann.
66 daqiiqo Luis Suarez ayaa hogaanka u sii dheereeyay kooxda Barcelona, iyadoo uu goolkan si quruxbadan kaga caawiyay saaxiibkiis Lione Messi, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 0-3.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 0-3 ay ku adkaatay Barcelona oo marti u aheyd kooxda Eibar, Blaugrana ayaana si ku meel gaar ah waxay hal dhibic kaga qabatay hogaanka horyaalka La Liga kooxda ku soo xigta ee Real Madrid oo caawa la balansan Mallorca.
Tababare Solskjær oo sheegay shuruuda kaliya uu kaga tagi karo kooxda Manchester United
Shaxda rasmiga ah kulanka adag kooxaha Chelsea Iyo Newcastle United ee horyaalka Premier League